Telefonada casriga ah ayaa si dhab ah nolosheena bedelay hab in aanan u baahan kombiyuutarada nala maalinta oo dhan. Waxaan buuxin kartaa hawlaha muhiimka ah ku qor telefoonada naga mobile. Tusaale ahaan: haddii aad ku jirto kulan, uma baahnid in ay xusuus qor ah iyo qalin, waxaad ku qori kartaa hoos dhibcood muhiim ah oo ku saabsan codsigaaga qoraalada aad iPhone iyo qayb ka mid ah ugu fiican yahay in qoraalladan si fudud ayaa loo gudbin karaa si aad Desktop ama Mac. Oo sidaas daraaddeed waxaad iyaga ku dari karaa in dukumentiyada kale ama ku kaydi u akhrin-dambe ujeedada.
Mararka qaarkood waxaan qorto qoraalo muhiim ah oo ku saabsan munaasabadda ama shirka iyo waxaan jeclaan lahaa in aan weligood u sii nala, tan waynu samayn karo by wareejinta qoraalo ka iPhone in account iCloud si aan mar dambe iyaga ka akhrisan kartaa ama isbedel aan iyaga ku jiro. Qaybta ugu fiican oo ku saabsan wareejinta qoraalo ay u account iCloud waa in aad iyaga ka akhrisan kartaa computer desktop kasta oo ay gasho si aad iCloud account ama wax iPhone kale, iPod Touch ama iPad kaas oo lala xiriirinayay ID isla Apple.
Natively, Lugood kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan qoraalada in account amal laakiin haddii aadan haysan Mudanayaasha account Lugood ah, waxaad isticmaali kartaa software xisbiga saddexaad si ay u gudbiyaan qoraalada ka iPhone in PC. Halkan waxa ku jira saddex barnaamij oo ugu wanaagsan si ay u gudbiyaan qoraalada ka iPhone in PC aan Lugood,
Rasmiga ah Page
CopyTrans Xiriir Website CopyTrans Riix Halkan 5,03 Mb Trail Free ama $14.99 oo kaliya
DiskAid Website DiskAid Riix Halkan 14,12 MB $29.90
Dr. Fone Dr. Fone Website Riix Halkan 802.07KB $79.95
1. CopyTrans Xidhiidhada:
CopyTrans Xiriirada waa utility weyn si ay u gudbiyaan xiriirada, fariimaha, qoraalo, jadwalka taariikhda, Xusuusin iyo Bookmarks. Waxa kale oo uu kuu sheegayaa macluumaad ah ee qalab aad. Qaybta ugu fiican yahay in ay tahay habka ugu raqiisan ee wareejinta qoraalo ay u computer aan Lugood oo ka shaqeeya sida soo jiidashada ah. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo aad awood karaa account iCloud ah si ay u gudbiyaan qoraalada si toos ah account iCloud. Halkan sida barnaamijka waxay u shaqaysaa in ka iPhone in PC wareejiyo qoraalada.
Download iyo rakibi CopyTrans Xiriirada ka links siiyey in miiska. Ka dib markii ay ku rakibidda xiriiriyaan iPhone la PC.
Laga soo bilaabo guddi bidix, dooro qoraalada.
Haddaba, xulo note ah oo aad rabto in aad nuqul ka si aad PC. Midig u guji ku yaal oo ku tusi doona siyaabaha kala duwan.
Riix "Dhoofinta Dooro" si ay u gudbiyaan note ee la doortay, si toos ah u badbaadin karto on desktop ama waa in Outlook awoodi karaa inuu wareejiyo.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u badbaadin Xusuusaha in account Muuqaalka ah, waxaa lagu wareejin doonaa ka yar "masaxay Items" folder.
CopyTrans Xiriirada waa aalad kaamil ah si ay u gudbiyaan qoraalada ka iPhone in aad PC ama account iCloud kaas oo ka yimaadaa 50 falalka lacag la'aan ah. Waxaa loola jeedaa in aad wareejin karaan (Import / Dhoofinta) 50 qoraalada u dhexeeya aad iPhone iyo PC gabi ahaanba bilaash ah kharashka. Dhinaca hoos, inta lagu guda jiro wajigii tijaabada our, qalab ku burburtay 2-3 jeer wax walba oo lagu nasto inay wanaagsan. CopyTrans Xiriirada waa kaliya la heli karo Windows, Mac users yeelan doonaan in ay soo bixi kale ah si ay u gudbiyaan qoraalada ka Phone in PC. Sidaas darted, haddii aad raadinayso habka ugu raqiisan si ay u gudbiyaan xiriirada, Messages, Notes, Xusuusin iyo Bookmarks in aad PC, waa in aad doorato kama dambaysta ah.
DiskAid waa dhan-in-mid file Tababaraha kala iibsiga u Windows iyo Mac halka dayn doonaa inaad wax walba ka iPhone in PC wareejiyo. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u gudbiyaan Apps, Photos, Media, iyo Farriimihiisa, abuse Phone, xiriirada, qoraalada iyo xitaa cadaymaha codka. Waxaad dhoofin kartaa xusuusqor ka iPhone in PC, laakiin haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan qoraalada, tani ma aha wax yahay. Waxa ugu wanaagsan waa in ay ka badbaadiyay qoraalada ee .txt, si aad si fudud iyaga ka arki kartaa adigoo isticmaalaya buugayga aad kombuutarka. Tallaabooyinka soo socda ayaa sharax in sida aad ka iPhone wareejin kartaa xusuusqor in PC.
Download oo ka Links siiyey in miiska loo soo dajiyo DiskAid. Hadda, xiriiriyaan iPhone la PC isticmaalaya cable USB.
Ka dib markii isku xira iPhone, guji "Xusuusaha". Halkan waxa aad ku arki doontaa oo dhan oo ka mid ah qoraalada badbaadiyey aad iPhone. Xaqa Riix note kasta si "Open" ama "nuqul PC".
Waxaad badbaadin karo Notes in ay meel on your computer. Waxa aad ku weydiiyo in ay doortaan caga si loo badbaadiyo qoraalada aad kombuutarka.
DiskAid waa codsi ah oo waxtar leh si loo dhoofin nooc kasta oo file ka iPhone in aad PC. Laga soo xiriir si qoraalo, sawiro muusikada, waxaad ka iPhone wareejin karaan file ah oo aad u PC. Si kastaba ha ahaatee, in la sameeyo in ay faa'iido leedahay, waxaad u baahan doontaa in la sameeyo gurmad ah oo dhan files aad iPhone. Sidaas, waxay qaadan kartaa dhawr daqiiqo ku xidhan tahay inta ay le'eg tahay gurmad file. Waxaa intaa dheer, waxa aanu u leeyihiin taageerada xisaab iCloud. Sidaas, si toos ah kuu soo gudbin kartaa xusuusqor in aad xisaabta iCloud.
Dr. Fone waa mid ka mid ah barnaamijyada priciest si ay u gudbiyaan ama qoraalada dhoofiyo ama file kasta oo kale oo ka iPhone. Laakiin waxa uu leeyahay waxyaalo badan oo waaweyn oo u gaar ah. Tusaale ahaan: Haddii aad iPhone waa la dumiyey ama laga badiyay, aad si fudud u soo saaro kartaa xusuusqor ka faylka kaabta. Waxaa intaa dheer, waxa ay sidoo kale ku wareejin kartaa xusuusqor ka account iCloud adiga oo aan iPhone. Sifooyinkaasi waa mid gaar ah waxaa barnaamijka weyn marka loo eego barnaamijka kale. Sidan ayaad ka kaabta iPhone, Lugood ama account iCloud wareejin kartaa xusuusqor isticmaalaya Dr.Fone:
First of dhan waxaad u baahan doontaa in la doorto ikhtiyaarka ka oo aad rabto in aad soo saaro qoraalo ah. Waxaa laga yaabaa inay ka iPhone, Lugood ee kaabta ama kaabta iCloud. Ka dib markii iskaanka, habka hartay waa isku mid:
Laga soo bilaabo iPhone:
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Dr.Fone ee aad kombuutarka, marka aad ku xidhi doonaa iPhone la PC. Waxaa idin tusin doonaa fursad ay "Scan" iPhone, Riix "Scan" in iskaan xogta oo dhan aad iPhone. Waxaa laga yaabaa iney qaadato xoogaa waqti ah.
Laga soo bilaabo kaabta Lugood,
Haddii aad rabto in aad soo saaro qoraalo ka gurmad Lugood ah, guji "kabsado Lugood Back up file" dooro kaabta ka aad rabto in aad soo saaro qoraalo ah. Guji "Start Scan" in la bilaabo geedi socodka iskaanka ah.
Laga soo bilaabo kaabta iCloud:
Si aad u soo saaro qoraalo ka kaabta iCloud ah, Dooro "Soo Celinta ka iCloud gurmad file" doorasho. Darsada aqoonsiga iCloud dooro gurmad ka aad rabto in aad soo celin qoraalada. Ka dib markii la doortay, guji download soo bixi gurmad in oo markaas dabadeedna waa iskaan.
Marka scan la dhammeeyo, guji "Xusuusaha" hoos "cadaymaha iyo kale" Tab.
Xaqa guji note in aad rabto in aad badbaadin on your computer. Sidoo kale waxaad u soo kaban karto, in computer ama iPhone.
Laga soo bilaabo computer, dooro caga meesha aad rabto in aad badbaadin faylka. Waxaa sidoo kale ka badbaadiyay file in hab HTML.
Dr. Fone waa barnaamij dhamaystiran kabsado iPhone inuu ka soo kabsado photos lumay, xiriirada, fariimaha, music, taariikhda Whatsapp iyo qoraalada u iPhone. Waa software ugu fiican kuwa iPhone yahay jabay ama laga badiyay. Waxaa intaa dheer, waxa kale oo ku caawin kara si loo badbaadiyo qoraalo ka account iCloud ah. Dhinaca kale, waxa laga yaabaa in ay qaadato waqti inuu ka soo kabsado dukumentiyada lumay. Kan ahayn, waa qalab ugu fiican.
Isticmaal Lugood si hagaagsan qoraalada la xisaab:
Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa xusuusqor ka iPhone via Lugood, Si kastaba ha ahaatee, qoraalada kaliya ee waa la badbaadin doonaa in account amal on PC Windows. Halkan sida aad u samayn karaa.
Connect aad iPhone la PC iyo furto Lugood. Hadda, Riix tab info ah.
Hoos u riixdaa iyo dooro "nidaameed Notes la Muuqaalka" oo ka dhacay badhanka nidaameed.
Marka u hagaagsan la dhammeeyo, waxaad arki doontaa qoraalo ee codsiga saadaasha. Riix icon qoraalada ku qoran geeska bidix ee hoose. Halkan waxa aad ku arki doontaa dhammaan qoraalada; waxa kale oo aad nuqul ka kartaa / iyaga paste meel kasta oo aad rabto.
Adoo isticmaalaya habkan, qoraalo si toos ah guuriyeen doonaa in saadaasha waqti kasta. Si kastaba ha ahaatee, habkan waa kaliya haboon in aad nuqulka qoraalada in account amal. Laakiin, haddii aadan ku rakiban aragti ama aadan rabin in ay isticmaalaan aragtida ah, habkan ma shaqeyn doonaan. Waxaa intaa dheer, waa Dhagar eheeyn si ay u gudbiyaan qoraalada ay u PC.
Isticmaal iCloud si ay u gudbiyaan iPhone Notes in Cloud:
Meesha ugu nabad ah si loo badbaadiyo dhammaan qoraalada iPhone yahay si ay u geliyaan on iCloud. Habkani shaqeeyaa ay u suuro-Notes in iCloud ah. Halkan sida aad u samayn karaa.
Tag goobaha iyo Riix "iCloud"
Ku qor faahfaahinta iCloud iyo awood "Xusuusaha" doorasho sida kaaga muuqata sawirka hoose.
Ka dib markii suuragelinayo, dib guji "Xusuusaha", dooro "iCloud" sida xisaabta default aad u Notes.
Hadda, dhammaan qoraalada aad si toos ah gelin doonaa in xisaabta iCloud, kaas oo aad ka heli kartaa wax kasta oo kale oo iPhone, iPod taabto ama iPad la isla iCloud account ama website iCloud sida kaaga muuqata sawirka hoose.
iCloud waa habka ugu nabad badan geliyaan dhammaan noocyada kala duwan qoraalada adeegyada daruurtii ka codsiga qoraalada. Qaabkan waxaa kaloo waa ka kaaftoomi-free, inaad sameyso oo dhan waxaa loo dhigay ilaa iCloud ah mar iyo inta kale ee shaqada la dhameeyo si toos ah aan looga faa'idaysan button kasta. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad awoodi doontaa in aad si toos ah badbaadin qoraalo aad kombuutarka.
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Motorola si iPhone
> Resource > iPhone > 3 Hababka si ay u gudbiyaan Notes ka iPhone in PC / iCloud